साग खेलकुद छाडेर किन कतार भागिन् कीर्तिमानी खेलाडी? मन्दिर जान्छु भनेर कतारतिर!
ऋग्वेद शर्मा शुक्रबार, मंसिर १३, २०७६, २१:२४
काठमाडौं- देश साग खेलकुदमय हुँदैछ। सागका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहकै छन्। केही काम चल्ने शैलीमा, केही खेल चल्ने शैलीमा!
नेपालमा तेस्रो पटक आयोजना भइरहेको खेलकुम्भ १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दैछिन्। उद्घाटनअघि नै भलिबलका खेलहरू चलिरहेका छन्।
अरू खेलका खेलाडीहरू पनि नियमित अभ्यासमा छन्। पदाधिकारीहरू अन्तिम दौडधूपमा छन्। सरकार आफ्नो उपलब्धीको सूचिमा एक बुदा थप्ने तयारीमा छ।
क्लोज क्याम्पमा रहेर त्यसरी अभ्यास गरिरहेका खेलाडीहरूमा बिहीबार बिहानदेखि एक खेलाडी भने छैनन्। सागमा सहभागी हुन विदेशी खेलाडीहरु त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल आइरहँदा त्यही विमानस्थलबाट कीर्तिमानी नेपाली खेलाडी तुलसा खत्री भने कतार लागिन्।
तर, त्यसले कसैलाई फरक पारेको छैन। अन्तिम समयमा खेलाडी नहुनुले पारेको असरभन्दा बढी तुलसाको पलायनले नेपाली खेलकुदले फेरि पनि महसुस गर्ने छैन। तुलसा कतार पलायन भएको सुनेर खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले निकालेको हाँसो त्यसैको उदाहरण हो। एथ्लेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले कमजोर आवाजमा ‘कम्तिमा साग सकिएपछि गइदिएको भए हुन्थ्यो’ भनेर देखाएको निरिहता यहाँ खेलेर केही हुँदैन भन्ने अर्को प्रमाण।
आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नेपाल आर्मीकी खेलाडी तुलसाले प्रशिक्षकहरूलाई ढाँटेर क्लोज क्याम्पबाटै भागिन्। खेलकुम्भमा यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। राष्ट्र खेल उत्सवमा लागिरहँदा कीर्तिमानी एक खेलाडी विदेश पलायन हुनुले दशरथ रंगशाला वरपरको साग तामझामलाई गिज्याइरहेको छ।
गएको कात्तिक ५ गते चीनको उहानमा भएको सातौँ विश्व सैनिक गृष्मकालीन खेलकुद प्रतियोगितामा तुलसाले चार सय मिटर दौडमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। २१ देशका धावकले प्रतिस्पर्धा गरेको प्रतियोगितामा तुलसाले दुरी ५९.५७ सेकेण्डमा पूरा गरेकी हुन्। यसअघि चार सय मिटरमा राष्ट्रिय कीर्तिमान ५९.९० सेकेण्डको रहेको थियो। जुन कीर्तिमान २०१० मा प्रमिला रिजालले राखेकी थिइन्।
९ वर्ष पुरानो कीर्तिमान भर्खरै तोडेकी तुलसा सागको लागि भइरहेको क्लोज क्याम्पबाट बिहीबार बिहान व्रत साङ्गे गर्न मन्दिर जान्छु भनेर कतार भागिन्। नेपाली खेलाडी विदेश पलायन हुनु नौलो कुरा हुन छाडिसक्यो। केशरी चौधरीहरूको पलायन पचाइसकेको नेपाली खेलकुदले विभागीय टिम छाडेर सागको मुखैमा भागिदिने तुलसाको पलायन भने सजिलै पचाउन सक्ने छैन। उनमा पदक जित्ने खुबी देखेका एथ्लेटिक्स प्रशिक्षकहरूलाई त झन् यसले नराम्रो सताउनेछ।
तुलसाले राष्ट्रिय टिमको क्याप किन छाडिन् त? उत्तर आर्थिक अवस्थासँग जोडिने भए पनि हामीले मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङलाई प्रश्न सोध्यौँ। उनी भन्छन्– ‘उनले क्याम्प छोडेको होइन। हामीलाई छलेर ढाँटेर भागेको हो।’
तुलसाले साथीहरुलाई आफू कतार जाने तयारीमा रहेको बताए पनि प्रशिक्षकलाई भने केही भनेकी थिइनन्। उनी मन्दिर जान्छु भनेर बिहान ५ बजे नै क्याम्पबाट हिँडेकी थिइन्। बिहान साढे ८ बजे अभ्यास सुरु हुने समयसम्म आइनपुगेपछि खोजी सुरू भयो।
तुलसाले बिहान प्रशिक्षकलाई एउटा म्यासेज गरेकी थिइन्– म आउन अलि ढिलो हुन्छ।
त्यही म्यासेजको आधारमा बसिरहेका प्रशिक्षकहरु ११ बजेसम्म पनि उनी नआएपछि भने तनावमा परे। फोन गर्दा सम्पर्क भएन। सबै आफ्नो काममा व्यस्त भए। दिउँसोको अभ्यास सुरु हुने समय साढे ३ बजे फेरि उनको खोजी भयो। प्रशिक्षकहरुले फोन गर्दा उनको मोबाइल अफ आयो।
प्रशिक्षक गुरुङ भन्छन्– ‘दिउँसोको अभ्यास हुने बेलासम्म पनि नआएपछि हामीले उनको साथीहरुलाई सोधेका हौँ। सबैलाई केरकार गरेपछि बल्ल थाहा भयो कतार भागेको पो रहेछ। विभागीय टिम आर्मीमार्फत बुझ्दा पनि भागेको भन्ने जानकारी नै पाएँ।’
त्यसपछि के भयो ? प्रशिक्षक गुरुङकै भनाइमा....
त्यसपछि मैले राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका संयोजक रिम रानाभाटलाई जानकारी गराएँ। बिहीबार बेलुका खेलकुद मन्त्रीको अगाडि नै मैले खेलाडी त भाग्यो भन्दा उहाँ पनि हाँस्नु भयो। आज मैले सबैलाई लिखित जानकारी गराएको छु। यस्तो समयमा आएर उनी भाग्दा म निकै दुःखी छु।
उनले विभागमा म्यासेज पठाएको थियो रे। मैले तपाईहरुलाई ढाँटे। खेल खेल्न चाहँदा चाहँदै पनि आफ्नो करियर बनाउनका लागि मैले हजुरहरुसँग झुट बोलेँ भनेर बिहीबार बिहान १०ः३९ मा म्यासेज पठाएको आर्मी विभागबाट जानकारी पाएँ।
बेलैमा थाहा भएको भए रोक्न सकिन्थ्यो, तर अब के थाहा, त्यसरी भाग्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा आउँदै आएन।
उनको अभावमा टिममा हुने नै छ। तर उनकै विकल्पमा अरुणा रिजाल छिन्। चार सय मिटर दौडमा उनी हुन्छिन्। हडल्स दौडमा कल्पना श्रेष्ठ मात्रै दौडिने भइन्।
तुलसा ४०० मिटर र ४०० मिटर हडल्स र रिलेमा थिइन्। उनी हुँदा रिलेमा हामीले निकै आश गरेका थियौं। तर उनी भागिन्। हामीलाई निकै ठूलो झड्का लागेको छ।
मलाई लाग्छ, सरकारको लगानीमा यत्रो क्लोज क्याम्प बसेर भाग्नेलाई जहाँबाट भए पनि झिकाएर कडा कारबाही गर्नु पर्छ।
जानै थियो भने हामीसँग सल्लाह गर्नु पर्छ नि। उसको करियर बन्छ भने साग खेलकुद पछि पनि भिसालाई डिले गरेर पठाउने थियौं। जम्मा ८–९ दिनको कुरा थियो। सकी हाल्थ्यो। भिसा डिले गर्ने प्रावधान छ। हामी स–सम्मान गरेर पठाउने थियौं।
साग खेलकुदको मुखैमा आएपछि धोका दिएर जाँदा म निकै दुःखी छु। अब त कस्तो भयो भने क्याम्पमा बस्ने खेलाडीको तीन पुस्ते दायाँ बायाँ लगाएर पासपोर्ट लिएर राख्नु पर्ने अवस्था आयो।